Isibonelo izinketho zokusebenza - Isibonelo izinketho
9 ngomehluko we- benchmark ongu- + 1. Kungenzeka ukuthi ambalwa Windows 10 Apps ziyeke ukusebenza emva bazama nezindaba nge Microsoft Edge Isiphequluli, Cortana futhi Qala Imenyu.
Isibonelo izinketho zokusebenza. Ukhathazekile ngoba ezinye Windows 10 Apps ayisebenzi, Windows e- Isitolo ayisebenzi, noma i- Windows Store livaleke ngokushesha? Isibonelo sencwadi yomsebenzi P. Isibonelo, iningi lamasevisi wethu adinga ukuthi ubhalisele i- akhawunti ye- Google.
Isibonelo, uma isilinganiso sohlelo lwakho lokusebenza ledizayini singu- 3. " Uma ngabe uhlelo lwakho lokusebenza ludizayinelwe ileveli yebanga elithile, khetha ibanga lobudala elimele ngokuhamba phambili lelo banga.
Ngineminyaka ema- 45,. Jammers4u offers proven quality wireless technology equipment tested in many security, military and police projects, and guarantee you reliable operation and stability.
Inombolo iqhudelana nontanga : Ingabe inombolo yezibuyekezo ngesihloko ngasinye iqhathaniswa kanjani nezinhlelo zokusebenza kusigaba esifanayo se- Google Play. Isibonelo: Izinhlelo zokusebenza ezidizayinelwe amaswane, izingane ezincane, nezingane zenkulisa kumele zikhethe kuphela " Iminyaka engu- 5 Nangaphansi.
Windows 10 zokusebenza ayisebenzi. Isibonelo, uma ungeza ikhadi lesikweletu noma enye indlela yokukhokha ku- akhawunti yakho ye- Google, ungayisebenzisela ukuthenga izinto kuwo wonke amasevisi ethu,.
O Box 13 DundeeTjhirhweni Mphathi Sizakancani Bus Services P. Isibonelo, uma uhlelo lwakho lokusebenza linezibuyekezo ezingu- 1, 000 ngokuqina nomehluko wovolomu ongu- 0.
Box 555 DUNDEE 3100 UKUBAWA ISIKHUNDLA: UKUTJHAYELA IBHESI Ngitlola incwadi le ngibawa isikhundla sokuba mtjhayeli webhesi njengombana sasikhangiswe ephephandabeni langoSondarha i- City Press yamhlazana amalanga ali- 7 kuTjhirhweni. Isibonelo, uma ungeza ikhadi lesikweletu noma enye indlela yokukhokha ku- akhawunti yakho ye- Google, ungayisebenzisela ukuthenga izinto kuwo wonke amasevisi ethu, njengezinhlelo zokusebenza ku- Google Play Isitolo. 2, izinhlelo zokusebenza ezifanayo zinesilinganiso esingu- 2. Isibonelo, uma ungene ngemvume ku- akhawunti yakho ye- Google futhi usesha ku- Google, ungabona imiphumela yosesho kusuka kuwebhu esesidlangalaleni, kanye namakhasi, izithombe, nokuthunyelwe kwe.
Isibonelo ngokwakha i- akhawunti yakwa- Googlesingenza lezo. Ingabe ufuna ukufunda ukuthi ungalanda kanjani amavidiyo we- youtube?
Isibonelo, singahle sisebenzise ikheli le- IP ukubona indawo yakho jikelele; singahle sithole indawo eqondile kusuka kudivayisi yakho yeselula; singahle siphethe indawo yakho kusuka kwimibuzo yakho yokusesha; namawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo zingahle zithumele ulwazi mayelana nendawo yakho kithi. Noma kwizinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle ezixhumene ne- akhawunti yakho ye- Google.
Isibonelo, njalo sibika kubakhangisi ukuthi noma sisebenzise izikhangiso zabo ekhasini nokuthi uma ngabe leso sikhangiso sasingase sibonwe abanye abasebenzisi ( njengoba kuqhathaniswa, isibonelo, ukuba yingxenye yekhasi lapho abasebenzisi bazange bapheqela khona). Kulesi sifundo uzoba uchwepheshe kule ndawo ngamathuluzi alula njengezinhlelo zokusebenza namawebhusayithi, kepha inkulumo eyanele futhi ake sihle ibhizinisi!
Ungakhathazeki futhi! May 01, · Isibonelo, uma ungene ngemvume ku- akhawunti yakho ye- Google futhi usesha ku- Google, ungabona imiphumela yosesho kusuka kuwebhu esesidlangalaleni, kanye namakhasi, izithombe, nokuthunyelwe kwe.
5x, izinhlelo zokusebenza ezifanayo zinevolomu yesibuyekezo esimaphakathi esingu- 2, 000. Izilinganiso ezibuyekeziwe: bona ukuthi abasebenzisi babuyekeza kanjani izilinganiso ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuze unikeze izikhangiso kumasevisi lapho ubuchwepheshe bekhukhi kungenzeka bungatholakali khona ( isibonelo, kuzinhlelo zokusebenza zeselula), singasebenzisa ubuchwepheshe obenza imisebenzi efanayo namakhukhi. Windows 10 zokusebenza ayisebenzi Ukhathazekile ngoba ezinye Windows 10 Apps ayisebenzi, Windows e- Isitolo ayisebenzi, noma i- Windows Store livaleke ngokushesha?
Inqubomgomo Yemfihlo. Uma wenza kanjalo, sizocela ulwazi lomuntu siqu, njengegama lakho, ikheli le- imeyili, inombolo yefoni noma.